न्यू आइटीभेन्चरले पोखरालाई स्मार्टसिटी बनाउने : समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
पोखरालाई देशकै पहिलो स्मार्ट सिटी बनाउन न्यू आइटीभेन्चर कर्पोरेसन र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाबीच बुधबार समझदारी भएको छ । सार्वजनिक र व्यक्तिगत साझेदारी (पिपिपि) अवधारणा अन्तर्गत सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारी अनुसार विश्वप्रसिद्ध पर्यटकीय नगरीका रुपमा स्थापित पोखरामा पर्यटन आगमन बढाउन र स्थानीय सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सूचना तथा संचार प्रविधिको उपयोग गरिने छ । त्यसै गरी महानगरपालिका लागि संघीय व्यवस्था अनुसार नयाँ नियम, कानुन बनाउने जस्ता चुनौतिहरु कायमै रहेका सन्दर्भमा प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्र स्मार्ट सिटीका आधारस्तम्भ मानिने मेगा आईसिटी परियोजनालाई दृष्टिगत गरी एनआईटिभीले पोखरालाई नेपालको पहिलो ...
नेपाल टेलिकमका मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताले अब लाइभ टिभी, मुभी र विभिन्न विधाका भिडियो तथा एफएम एउटै मोबाइल एपमार्फत हेर्न तथा सुन्न सक्ने भएका छन् । यस प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने एप्स ‘वाउटाइम’ एप सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल टेलिकम र विन नेपाल प्रालिको सहकार्यमा सो एप्स सञ्चालनमा आएको हो । सो एप्समार्फत लाइभ टिभी, मुभी तथा भिडियो हेर्न र एफएम सुन्न सकिन्छ । लाइभ टिभीमा नेपाली, हिन्दी तथा विदेशी भाषाका विभिन्न विधाका १३० च्यानल हेर्न सकिन्छ । भविष्यमा च्यानलको संख्या आवश्यकता अनुसार थप्दै जाने योजना छ । त्यसैगरी ...
संसारको प्रख्यात वेबसाइट बनाउने र सित्तैमा पाइने (Open source) सफ्टवेर ‘वर्डप्रेस (WordPress)’ सम्वन्धि अन्तरास्ट्रिय स्तरमा गरीने सेमिनार कार्यक्रम “वर्डक्याम्प काठमाडौँ” को तेस्रो संस्करण वर्डक्याम्प काठमाडौँ २०१८ को आयोजना आगामी चैत्र ३ र ४ गते शनिबार र आइतबार (मार्च १७ र १८)मा काठमाडौँमा हुने भएको छ । वर्डक्याम्प विश्वव्यापी रुपमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । नेपालमा भने सन् २०१२ देखि नेपालका वर्डप्रेस प्रयोगकर्ता तथा सफ्टवेयर विकासकर्ताहरुको समूह – वर्डप्रेस नेपालद्धारा वर्डक्याम्प पहिलोपटक आयोजना भई प्रत्येक वर्ष आयोजना हुदै आएको छ । एक तथ्यांक आनुसार विश्वका सम्पूर्ण ...
हालै एप्पलले आफ्नो बहुप्रतिक्षित फोन आइफोन एक्स लञ्च गर्यो । अमेरिकामा यो फोनको ६४ जिबी मोडेलको मूल्य ९ सय ९९ डलर तोकिएको छ । एक वेबसाइटका अनुसार आइफोन एक्सको वास्तविक लागतका बारेमा केही शोधकर्ताहरुले गहन अनुसन्धान गरेर विभिन्न तथ्य जम्मा पारेका छन् । समाचार अनुसार आइफोन एक्स तयार पार्नका लागि एप्पललाई जम्मा ४ सय १२ डलर ७५ सेन्ट मात्र लागत लागेको छ । यो लागत आइफोन एक्सको तोकिएको मूल्यको जम्मा ४० प्रतिशत मात्र हो । रिपोर्ट अनुसार यो फोनको सबैभन्दा महंगो पार्ट यसको ५.८ इन्चको डिस्प्ले रहेको छ ...
सामसङले आफ्नो पछिल्लो उत्पादन उत्पादन ‘सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले विश्व बजारमा सार्वजनिक गरेको एक महिनाभित्रै नेपाली बजारमा सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ ल्याएको हो। कम्पनीले सोमबार आफ्नै भवनमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त फोन सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका डेपुटी जेनरल म्यानेजर प्रनयरत्न स्थापितले नेपालमा सामसङको ग्यालेक्सी नोट ८ ले सजिलै बजार लिने बताए । स्मार्टफोन बजारमा सामसङको यस उपस्थितिले ग्राहकलाई दसैंको अवसरमा नयाँ उपहार हुने स्थापितको भनाइ छ। ‘यो अहिलेसम्मकै ठूलो डिस्प्लेयुक्त फ्ल्यागसिप स्मार्टफोन हो । फोनमा डुअल ...
सगुनका युजरलाई खुशिको खबर
काठमाडौं। सोसियल कर्मस साइट सगुनका प्रयोगकर्ताहरुका लागि खुशिको खबर छ। नेपालीले अमेरिकामा स्थापना गरेको अरुभन्दा फरक खालको सामाजिक संजाल सगुन अब मोवाइल एपमा समेत उपलब्ध हुने भएको छ। केही अघि विश्वभर आफ्नो सेयर बेचेर चर्चामा आएको सगुन इंकले एन्ड्रोइड भर्सनमा एपको फस्ट लुक सार्बजनिक गरेको छ। सगुनले केही महिनाअघि अमेरिकी बजारमा मिनी आइपिओ जारी गरेको थियो। वेवमा रहेको सगुनलाई अब मोवाइलमै उपलब्ध गराउन यसका दर्जनौं इन्जिनियर भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको सगुनको दक्षिण एशियाली कार्यालयमा अहोरात्र खटिइरहेका छन्। सगुनकी सहसंस्थापक स्वाती दयालले सगुनको मोवाइल एपको फस्ट ...
सावधान ! फेसबुकमा यस्तो पोष्ट गर्दा जेलको हावा खानुपर्ला
फेसबुकको माध्यमबाट हामी एकअर्कामा निकै सजिलोसँग जोडिन्छौँ । दिनहुँ हुने घटनाहरु सोसल मिडियामा अपडेट गरिरहन्छौँ । तर के तपाइँले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि यही फेसबुक पोष्ट हाम्रा लागि समस्या बनेर पनि खडा हुनसक्छ । समस्या पनि सानो होइन, सीधै जेल पूर्याउने । विश्वका विभिन्न देशमा घटेका केही यस्ता घटनाको बारेमा जानौं, जसका कारण फेसबुक प्रयोगकर्ता जेल जानुपरेको थियो । पूर्वपत्नीलाई फेसबुकमा ट्याग गर्दा अमेरिकाका मारिया गोन्जालेजले जनवरी २०१६ मा आफ्नी पूर्वपत्नी मेरिबेल काल्ड्रेनको बेइज्जती गर्दै एक फेसबुक पोष्ट गरे र त्यसमा मेरिबेललाई पनि ट्याग गरे । फेसबुक पोष्टमा ...
ग्यालेक्सी नोट-८ भर्सेस आइफोन-१०ः कुन उत्कृष्ट ?
एप्पलले अबको दशकको स्मार्टफोन उद्योगलाई दिशानिर्देश गर्ने दावी गरेको ‘आइफोन एक्स’ नोभेम्बरमा बजारमा आउनेछ । तर, यसले अन्य थुप्रै उच्चस्तरको फोनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ, जो अहिले नै बजारमा आइसकेका छन् । त्यसमध्येको एक हो, ग्यालेक्सी नोट एट, जुन तपाईंले अहिल्यै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । यो धेरै हिसावले अलग डिभाइस हो । यसमा एन्ड्रोइड सिस्टम छ र आइफोन एक्सको तुलनामा यो ठूलो पनि छ । दुई फोनका बीच महत्वपूर्ण समानता र अन्तर छन् । त्यसैले हामीले तपाईलाई यी दुई फोनको तुलना प्रस्तुत गर्न लागेका छौं । बायोमेट्रिक्स जव बायोमेट्रिक्सको कुरा आउँछ, ...
४ अक्टोबरमा गुगलको नयाँ स्मार्टफोन
गुगलले आगामी ४ अक्टोबरमा आफ्ना नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । हालै सार्वजनिक भएको गुगलको एक नयाँ टिजर अनुसार पिक्सेल टू र पिक्सेल टू एक्स एल नामक स्मार्टफोन अक्टोबर ४ मा रिलिज हुने सम्भावना छ । मेड बाइ गुगल नामक साइटमा सार्वजनिक टिजरमा लेखिएको छ, ‘स्मार्टफोन बदल्ने बारेमा सोँच्नुभएको छ ? थाहा पाउनुहोस्, अक्टोबर ४ का बारेमा।’ यद्यपि यस दिन गुगलका कुन कुन फोन आउँदैछन् चाहीँ भनिएको छैन । तर उल्लेखित दुबै स्मार्टफोन गुगलले एकसाथ सार्वजनिक गर्ने अड्कल धेरैले काटेका छन् । यो वर्ष अन्य सबैजसो प्रतिस्पर्धी ...
गायकी सिकाउने एप्सको क्रेज
एक जमाना थियो, गीत गाएको सुन्न वा रेकर्ड गराउन रेडियो नेपाल नै पुग्नुपथ्र्यो । पछि रेडियोमा खाली चक्कामा रिल हालेर गीत गाउन सकिने प्रविधि आयो । बिस्तारै टेप रेकर्डरमा आवाज रेकर्ड गराउने सकिने भइयो । त्यो प्रविधिको विकास नै थियो । अहिले भने प्रविधिको बढ्दो विकासले इच्छाएका कुरा स्मार्टफोनमा पाउन सकिन्छ । गीत सिक्न होस् या रियाज गर्न, अब संगीत पाठशाला पुग्नुपर्दैन । हातहातमा भएको स्मार्टफोन नै सबै चीजको ‘गुरु’ बनेको छ । गीत गाउन सिकाउने विभिन्न एप्सको प्रयोग अहिले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो देखिन्छ । स्टारमेकर ‘सिंग टु ...
आखिर आइफोन एक्स यसकारण होइन क्रान्तिकारी
आफ्नो बहुप्रतिक्षित आइफोन एक्सको घोषणा गरेसँगै एप्पलका सिइओ टिम कुकले भने, ‘यो एप्पलको पहिलो आइफोन घोषणा भएयताको सबैभन्दा ठूलो उछाल हो’ । क्यालिफोर्नियामा एप्पलको नयाँ कार्यालयस्थित स्टिभ जब्स थिएटरमा मंगलबार आइफोनको १० औँ वर्षगाँठको अवसरमा आइफोन एक्सको मोडल विशेष महत्व दिएर लञ्च गरियो । यद्यपि यसलाई नकार्न सकिँदैन की आइफोन एक्स विभिन्न मानेमा एउटा उछाल नै हो । पहिलो कुरा, आइफोनको इतिहासमा यो सबैभन्दा महंगो फोन हो । यसको मूल्य अमेरिकी बजारमा ९ सय ९९ डलर तोकिएको छ । त्यसैले विश्वका अन्य बजारमा यसको मूल्य अझै उच्च हुने ...
आकर्षणमा फोर-जीः एनसेलको प्रतिग्राहक डाटा खपत २ गुणाले बढ्यो
नीजि क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका ग्राहकहरुले गर्ने प्रतिग्राहक डाटा खपत एकवर्षमा २ गुणभन्दा बढीले वृद्घ िभएको छ । एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को दोस्रो त्रैमासिकको प्रतिवेदन अनुसार, प्रतिग्राहक प्रतिमहिना डाटा खपत ३४१ एमबी पुगेको छ । गतवर्ष सोही अवधिको तुलनामा यो दोब्बर भन्दा बढिले वृद्धि हो । आजियाटाको तथ्याङ्क अनुसार, गतवर्ष सोही अबधिमा प्रतिग्राहक प्रतिमहिना डाटा खपत १६० एमबी रहेको थियो । पछिल्लो समयमा डाटा खपत बढ्नुको प्रमुख कारण फोरजी सेवा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलले जेठ १८ देखि फोरजी ...
ओप्पोको सेल्फी केन्द्रित नयाँ फोन ‘ए ७१’ सार्वजनिक हुने
वैश्विक स्तरमै अग्रणी प्राविधिक ब्राण्डका रुपमा परिचित ओप्पोले अत्याधुनिक सेल्फी प्रविधि तथा आकर्षक डिजाइन सुसज्जित नयाँ फोन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । ओप्पोले नेपाली उपभोक्ताको माग र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ क्यामेरा फोन ओप्पो ए७१ सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको हो । सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको ए७१मा ओक्टा-कोर सीपीयू + ३ जीबी र्‍याम र ३ हजार एमएएच ब्याट्री उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ओक्टा कोर प्रोशेसर सुसज्जित ए७१ले प्रयोगकर्तालाई सहज फोन परिचालनको अनुभुति प्रदान गर्नुका साथै यसको प|mण्ट क्यामेरामा ओप्पोको विशेष ब्यूटिफाई ४.० फोटोग्राफी प्रविधिपनि ...
काठमाडौं - २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट धेरै नेपाली शारीरिक रूपमा अशक्त र अपांग बने । उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन इन्फिनिटी ल्याबका पाँच युवाले प्रविधिमा आधारित स्मार्ट इलेक्ट्रिक ह्विल चेयरको विकास गरेका छन् । यसले धेरैको जीवन सहज बनाएको छ । पाँच जुझारु युवा सन्तोषराज न्यौपाने, सुनी परियार, मेनसन लाखेमरु, प्रजेश श्रेष्ठ र भरत श्रेष्ठको टिमले विकास गरेको यो प्रविधिले धेरैलाई आकर्षित गरेको छ । स्मार्ट इलेक्ट्रिक ह्विल चेयर बनाउन इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर फर डिसएबिलिटी सेन्टर (सीआईएल)ले सहयोग गरेको छ । सीआईएल ह्विल चेयर प्रयोग ...
काठमाडौं- बिहीबारदेखि काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी मेला ‘क्यान कमटेक २०१७’ सुरु भएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले आयोजना गरेको प्रदर्शनी असोज १ गतेसम्म चल्नेछ । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रको व्यवसायिक विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्षजस्तै यसपालि पनि क्यान कमटेक हुन लागेको हो । बिहीबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मेला उद्घाटन गर्दै क्यान महासंघले हरेक वर्ष गर्ने विभिन्न मेलालाई सहरमा मात्र नभएर जिल्ला स्तरमा पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रसम्म सूचना तथा प्रविधिको विकास नगर्दासम्म मुलुकले यस ...